Abakhiqizi bohlelo lwe-Drawer System & abahlinzeki - I-China Drawer System Factory
I-Soft Closing Slim Double Wall Drawer Slide
Isingeniso:Isilayidi sedilowa esinezindonga ezimbili esivala okuncane esivame ukusetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugeza. Lolu hlobo lwesilayidi esisheshayo sokuvala okulingene slim double wall use slide ekhabetheni nge-gear. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: UM04.86
Idilidi lokuphakama elingu-150mm slid sliding ekhishini
Isingeniso:I-150mm drawer slide slid sliding ekhishini ekhalishini imvamisa isebenzisa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lwesilayidi esisheshayo sokuvala okulingene slim double wall use slide ekhabetheni nge-gear. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: M04.150
Ukuphakama okungu-182mm ibhokisi elincane elincane eliseduze ekhishini lekhabethe lensimbi
Isingeniso:Ukuphakama okungu-182mm ibhokisi elincane elincane eliseduze ekhishini ikhabethe lensimbi ekhabethe imvamisa lisebenzisa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lwesilayidi esisheshayo sokuvala okulingene slim double wall use slide ekhabetheni nge-gear. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: M04.182
Isistimu yekhabethe lensimbi engu-118mm yensimbi yesilayidi esincane
Isingeniso:Uhlelo lwe-118mm metal box drawer slide slim drawer system luvamise ukusetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela. Lolu hlobo lwesilayidi esisheshayo sokuvala okulingene slim double wall use slide ekhabetheni nge-gear. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: M04.118
Ukuthuliswa kokuthula okuthambile okuthulile kwesilayidi sedilowa sodonga oluphindwe kabili
Isingeniso:Ukuthuliswa okuthulile kokunyamalala okuthulile kwesilayidi sedilowa ephindwe kabili kusetshenziswa amakhabethe ekhishi nasendlini yokugezela. Lolu hlobo lwesilayidi sedilowa sodonga olusetshenziswa kabili lusetshenziswa umgijimi wedrowa ocashile onamagiya. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: UM01.199
Uhlelo lwamabhokisi ekhabethe lwamadilowa ensimbi kanye nokukhishwa okushelelayo buthule
Isingeniso:Uhlelo lwebhokisi lamadrowa labakhiqizi bensimbi kanye nokukhishwa okushelelekile buthule okuvamise ukusetshenziswa ekhishini nakumakhabethe okugeza. Lolu hlobo lwamaslayidi ebhokisi lensimbi ekhishini lisebenzisa isilayidi sedrowa esisezansi esinegesi. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: UM01.86
Uhlelo lwe-Double Wall Metal Sliding Drawer
Isingeniso:Isistimu yedrowa yensimbi eslayida kabili evame ukusetshenziswa ekhishini namakhabethe okugeza Lolu hlobo lwamaslayidi ebhokisi lensimbi ekhishini lisebenzisa isilayidi sedrowa esisezansi esinegesi. Isici amaslayidi asebenza ngokuthula ukuvumelanisa okushelelayo nokugcwele ngaphandle komsindo. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Uhlelo lwe-Double Wall Slim Box Drawer
Isingeniso:Isistimu yedrowa yebhokisi ledonga elincane elisebenzisa kabili ukusebenzisa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela Lolu hlobo lwe-slim box drawer system lisebenzisa ithule elithule eliseduze lokwehlisa idilowa elinamadivayisi wokukhiya. Futhi ungashintsha usebenzise i-Push ukuvula isilayidi sedrowa esifihlekile ngeziqeshana zangaphambili. Isici salo mkhiqizo islaydi sokwehlisa idonsa singakusebenzisela idrowa lensimbi kanye nedilowa lokhuni. Ingakongela izindleko zempahla yakho. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: UM02.89
Isingeniso:Silent soft lock ekhabetheni lokuvame ukusetshenziswa ekhishini & yokugezela amakhabethe. Lolu hlobo lwesistimu yedilowa yokuvala ethambile ethule lisebenzisa ithule elithule eliseduze lokwehlisa idilowa enamadivayisi okukhiya. Futhi ungashintsha usebenzise i-Push ukuvula isilayidi sedrowa esifihlekile ngeziqeshana zangaphambili. Isici salo mkhiqizo islaydi sokwehlisa idonsa singakusebenzisela idrowa lensimbi kanye nedilowa lokhuni. Ingakongela izindleko zempahla yakho. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: M02.185
Amaslayidi we-Slim Metal Drawer Box Drawer
Isingeniso:Amaslayidi wesilayidi webhodibhodi yensimbi encane asetshenziselwa amakhabethe ekhishi namakamelo okugezela Lolu hlobo lwamasilayidi webhokisi lamadlowa wensimbi elincane elisebenzisa kancane lisebenzisa isilayidi esithobekile esithobekile sedilowa ngamadivayisi wokukhiya. Futhi ungashintsha usebenzise i-Push ukuvula isilayidi sedrowa esifihlekile ngeziqeshana zangaphambili. Isici salo mkhiqizo islaydi sokwehlisa idonsa singakusebenzisela idrowa lensimbi kanye nedilowa lokhuni. Ingakongela izindleko zempahla yakho. Uma unesithakazelo ohlelweni lwethu lwe-slim box drawer, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imodeli No .: M02.121